Ny fanazaran-tena amin'ny fampiofanana mavesatra, na dia be mpitia aza izy io, dia mbola miteraka fisalasalana ihany amin'ireo izay te hihena. Ny antony dia nilaza fa ny fiandohan'ny fampiharana dia rehefa mavesatra dia mahazatra ny mahita lanja mitovy na lehibe kokoa noho ny voalohany aza. Te hahafantatra ve ianao, raha ny marina, ity fanazaran-tena ity dia mahatonga anao ho matavy na hihena? Jereo àry ny valiny etsy ambany.
Fandoroana tavy vs. fahazoana hozatra
Ny fampiofanana mavesatra, rehefa vita tsara sy miaraka amin'ny sakafo voalanjalanja, dia afaka miantoka ny hafainganana amin'ny metabolisma ary, noho izany, ny fitomboan'ny fandoroana tavy.
Miaraka amin'izany, ny mpampiasa ity hetsika ara-batana ity dia afaka miaina fihenan'ny haavon'ny tavy amin'ny vatana ary mampihena ny lanjany. Izay no niavian'ny hevitra hoe mihena ny lanja.
Etsy ankilany, na izany aza, io tavy io dia soloina famoronana faobe mahia, izany hoe amin'ny fananganana hozatra. Amin'io lafiny io, ny hozatra dia milanja mihoatra ny tavy ary na dia manome toky aza ny fiakaran'ny tahan'ny metabolisma dia manome toky koa izy ireo ny fitomboana - na farafaharatsiny - fikojakojana ny isa amin'ny maridrefy.
Noho io zava-misy io sy amin'ny fanadihadiana mivaingana, maro ny olona no mieritreritra fa mihabe ity fanao ity.
Ny tena olana anefa dia ity hetsika ity dia azo antoka fa tsy mampatavy, fa sady tsy mahay mampihena toa ny fanazaran-tena aerobika avo lenta, ohatra. Amin'ny ankapobeny, ny antony mahatonga azy io dia ny fiovan'ny fanaingoana ny firafitry ny vatana, manolo ny tavy amin'ny hozatra.
Ny isa amin'ny maridrefy dia tsy izany rehetra izany
Rehefa miresaka momba ny maha-matavy anao na mampihena lanja anao ity fanao ity dia ilaina ny mitandrina tsara satria ny isa izay miseho eo amin'ny mizana dia tsy midika fandrosoana foana amin'ny fizotran'ny fihenan-danja na amin'ny fikatsahana fiainana salama.
Izany dia satria ny fampiharana ny hetsika aerobika, ohatra, dia mitondra ny fahatsapana fihenan-danja haingana, raha ny tena izy, ny ankamaroan'ny nesorina dia tsy misy afa-tsy ranon-kazo voatana.
Ny lazan'ny bodybuilding amin'ny fahazoana lanja, raha ny marina, noho ny fiovan'ny rafitra ao amin'ny vatana, izay, amin'ny fanadihadiana farany, dia mahasoa. Ny hozatra bebe kokoa dia midika hoe fandaniana kaloria bebe kokoa ary noho izany ny metabolisma haingana kokoa izay mitarika fandoroana tavy lehibe kokoa. Rehefa mavesatra kokoa ny hozatra dia mahazo valiny mitovy na lehibe kokoa amin'ny ambaratonga ianao, saingy hafa ny vatanao - ho tsara kokoa.
Izany no mahatonga ny fiheverana ny isa isa fotsiny fa tsy dia mahasoa satria tsy voatery hitaratra ny zava-misy amin'ny vatanao. Ny fianteherana bebe kokoa amin'ny fandrefesana sy ny fandrefesana ny haavon'ny tavy dia manisa mihoatra ny mizana.
Fa, maninona, ny fampiofanana mavesatra no mahatonga anao matavy na mihena?
Ny fanontaniana mipetraka ihany anefa dia ny hoe matavy na mampihena ny lanjanao ny fampiofanana mavesatra. Ny marina dia, amin'ny farany, very lanja izy, saingy tsy mampihena ny isa maridrefy izany.
Raha mitady ny fihenan'ny lanjanao ianao dia manandrama manelanelana amin'ny hetsika aerobic avo lenta, izay hanampy anao hampihena ny isa mizana.
Amin'ny farany, ny fampiofanana mavesatra dia tsy mampatavy anao, fa manome toky kosa ny fananganana hozatra, izay manelingelina ny fifandanjana. Noho izany, mihoatra ny fandinihana ireo isa eo amin'ny maridrefy fotsiny dia tandremo ny famantarana ny vatanao mba hahalalanao raha tena mitondra ny soa tadiavinao ilay fampiharana.